Tigreega iyo Yugaandheyska oo duqayn arxan daran ka gaystay suuqa wayn ee Bakaaraha wakhti lagu jiray diyaar garowga ciidda. | Nabadi caadalad ayaa kaa horresa
Tigreega iyo Yugaandheyska oo duqayn arxan daran ka gaystay suuqa wayn ee Bakaaraha wakhti lagu jiray diyaar garowga ciidda.	Seteembar 23, 2008
Isniin 22 Ramadaan 1429 (22/09/2008)
Madaafiic aad u culus oo isdaba joog ah ayaa maanta lagu bartilmaameedsaday Suuqa Bakaaraha oo maalmahan ahaa mid aad u mashquulsan oo dadbadan usoo doonteen dhar iyo waxyaabaha ciida looga baahanyahay.
Madaafiicda oo laga soo ridayay Xeryaha Yugaandhiiska iyo Tigreega ayaa dhammaantood lagu soo jeediyay dhinaca Bakaaraha, meelaha ay kusoo dhaceena waxaa ka mid ahaa suuqa Khudaarta, Isgoyska Howlwadaag, suuqa Cabdallah shideeye iyo meelo badan oo kale oo dhammaantood ahaa goobo mashquul badan.
Khasaaraha gaaray dadka shacabka ah ayaan lasoo koobi karin maadaama ay duqayntu ahayd mid aad u badan waxana jira dhimasho iyo dhaawac faro badan.
Cadaawadan iyo arxan daradan ayaa ah mid lagu yaqaan cadow kasta oo qabsada dalalka Muslimiinta, wax ku cusub taariikhda muslimiintana maaha, waxana mar kasta lagala hortagi jiray Jihaad tasoo ugu damayn guusha ay heli jireen Muslimiintu, sidaa darteed waxaa la inooga baahanyahay inaan ku samirno isla markaana qoriga wada qaadano oo aan difaacano diinteena iyo sharafkeena.